Izvi Top Tips kuti kufamba kwenyu dzinovaraidza vanofanira kubatsira kuderedza kuzvidya mwoyo kwenyu. Nekuti regai pachena, vaifamba yenyu mhuka dzinovaraidza anoshungurudza! Asi chii zvakawanda anoshungurudza, ndiyo pfungwa yokusiya zvipfuwo zvenyu kumba kana vari kutarisirwa nevamwe. Zviri pachena kuti hapana munhu akatarisa shure kwavo nzira zvaunoita! Rudyi?
Pane zvakawanda zvaunogona kuita kuti zvokuita kana uri kufamba pamba. Dog Hotels, vakabhadhara munhu muchengeti kana tama mutoro, kunyange munhu akanaka chete, kuti shamwari yako vari pakati sarudzo. Ava rakajairika kuti vanhu vade. zvisinei, dzimwe nguva hakuna mumwe chisarudzo uye unofanira kufamba kwako dzinovaraidza. Nepo zvingava zvikuru yakaoma nzira, Save A Train ane zvimwe pamusoro mazano kuti achakubatsira paunenge vaifamba dzinovaraidza!
Kuenda itsva nzvimbo zvinogona uye zvimwe achava musoro wako dzinovaraidza. Saka nechokwadi chokuti anoramba sezvo vagadzikana sezvinobvira kunokosha hwomutambarakede rwendo vose vanobatanidzwa. Uyai matoyi ake dzose, magumbeze, nezvimwe zvinhu kuti aite imbwa yako kana katsi wakasununguka. Vakanga akadzikama uye havana kuita chinhu chakaipa? Ivai nechokwadi kuti imi mubayiro kuti kufamba dzinovaraidza vasununguka mune ramangwana.
Uchida kana kwete, izvi Top Tips kuti kufamba kwenyu dzinovaraidza zvinoreva uri gonna kunge kuita zvimwe zvigadzirwa muviri! Just usati watanga vanofambira, kuvatora vamwe kurovedza muviri! Nemhaka yokuwedzera-refu kufamba kana vanomuda zvikuru neshamwari yako mudiwa fluffy, iye kana iye ave wakarurama vaneta kunetseka pamusoro pezvinhu. kana wawana katsi kuti haisi saka kwazvo kubatwa kuti run, edza kuti akurudzire kwavari mukati. Make-kusuduruka matoyi vanogona kuuya ari nzira guruva mops Somuenzaniso! Vimba neni… Ndine ruzivo mu vaifamba dzinovaraidza!
Nyika dzinosiyana pane zvadzinoda. Nyika zhinji zvinoda kupatsanura varwere nguva, saka kana uchida kupedza nguva vaifamba yako dzinovaraidza, nechokwadi iwe kaviri tarisa ichi! nyika dzakawanda zvinoda kwepfuti kuti chimbwamupengo, bordetella (usamo chikosoro), uye parvo. Dana nhume uye kutsvakurudza yako paIndaneti kuona chii nyika zvinodiwa, uye nechokwadi kuti nyaya dzemapepa yako batsira apo kuyambuka muganhu.
Unogona kutsvaka pamusoro kufamba dzinovaraidza uye nyika zvinodiwa pa PetTravel.com.
Myscha Theriault is a best-selling author and internationally-syndicated travel columnist who travels full-time with her science journalist husband and giant Labrador retriever. Naye Electronic kopi batsira, ari akagadzirira kubereka utano zvitupa imbwa yake nguva dzose sezvinodiwa.
Unoda embed yedu Blog romukova “Top Tips For Rokufambira With Pets Your” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tips-traveling-with-your-pets/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)